COVID Organics si Africa na-agwọ Coronavirus ma dị maka ụwa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » COVID Organics si Africa na-agwọ Coronavirus ma dị maka ụwa
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Ajụjụ Ọnụ • Akụkọ Madagascar • News • ndị mmadụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Njem, njem nleta na ahihia bu nnukwu ahia na Madagascar. Ndị bi na nke a African Island Country karịrị nde mmadụ 26. Ka ọ dị ugbu a, ọ nweghị onye nọ na Madagascar nwụrụ na Coronavirus, ma ọ bụ naanị 85 na-arụ ọrụ. Obodo a di na Southern Indian Ocean mara maka agwa di egwu, osimiri, na ihe ndi ozo.
N'April Madagascar ebulaola mkpọchi na obodo atọ dị na mba ahụ, na-agbakwunye na Malgache "ọgwụgwọ" maka ọrịa a nwaleela nke ọma. Ọgwụ a dabere na ọmụmụ nke Malagasy Institute of Applied Research ma kesaa ya na Madagascar n'efu. Ya mere, gịnị ka ọgwụ a dị? Kedu ihe esi eme ya? Ma olee otú ọ ga-esi dị irè n'ọgụ a na-alụso Coronavirus?
Aha ahịhịa ya bụ Umhlonyane (Zulu), Lengana (Sotho), na Artemisia (Bekee), a ga-ahụ ya n’ogige gị. Yabụ na n'oge niile ị nwere ọgwụgwọ COVID-19 n'ụlọ gị, "ka akwụkwọ ozi Facebook sitere na Madagascar bipụtara na 27 Eprel.
A na-eji Artemisia eme ọgwụ ndị ọdịnala. Na 2012 thetù Ahụ Ike Worldwa kwuru na a ga-eji ọgwụgwọ nwere akwụkwọ epupụta nke osisi artemisia na mkpokọta ọgwụgwọ “site na ọgwụ antimalarial dị irè” iji gwọọ "ịba na-adịghị mgbagwoju anya"
Ọ bụ artemisia bụ ọgwụgwọ maka Covid-19, ọrịa nke coronavirus ọhụrụ ahụ kpatara? Onye isi ala Madagascar chere na ọ dị.
Madagascar, nke bu Republic of Madagascar, ma buru nke mbu mara dika Malagasy Republic, bu obodo agwaetiti di na Oke Osimiri Indian, ihe dika nari kilomita 400 site na ikpere anyanwu Africa. Na 592,800 square kilomita, Madagascar bụ mba 2nd kasị ukwuu n'àgwàetiti.
Madagascar bụ mba juputara na akụ ndị sitere n'okike, nke gụnyere ọgwụ ọdịnala na ọgwụgwọ ụlọ. Ọ gụnyere "COVID Organics" nke a maara dị ka Malgache.
Onye isi ala Madagascar Andry Rajoelina na mkparịta ụka nkịtị ya na FRANCE 24 na RFI, gbachitere nkwalite nke usoro mgbagha ụlọ maka Covid-19 n'agbanyeghị enweghị ule ahụike. "Ọ na-arụ ọrụ nke ọma," ka o kwuru banyere ahịhịa ihe ọ drinkụ drinkụ COVID-Organics. Rajoelina kwuru na ọ bụrụ na mba Europe achọpụta ihe ngwọta ya, ndị mmadụ agaraghị enwe obi abụọ.
Na Mọnde, Onye isi ala Andry Rajoelina gosipụtara usoro ọgwụgwọ nke osisi o kwuru gosipụtara nsonaazụ na-agba ume n'ịlụ ọgụ megide coronavirus. Onyeisiala tinyere foto site na ngosi na onyonyo nke ihe ọ kpọrọ ọgwụ "COVID Organics" na ibe Facebook ya.
Onye isi ala Madagascar Andry Rajoelina na Mọnde wepụrụ nkatọ maka ịkwalite "ọgwụgwọ" nke ụlọ maka COVID-19, na-ebo ebubo na West nwere echiche wedara ala maka ọgwụgwọ ọdịnala Africa.
Healthtù Ahụ Ike Worldwa (WHO) adọwo aka ná ntị ugboro ugboro na a nwalebeghị ọgwụgwọ ahụ n'ụlọ ọgwụ. Agbanyeghị, enwere ọtụtụ na ndidi na-arịa ọrịa Coronavirus na-adị mma karịa awa 24 mgbe enyere ọgwụ a. Ọgwụ ahụ adịghị egbu egbu, nke okike, ma dịka onye isi ala si gwọọ n'ime ụbọchị 7-10.
Ndi Gambia anatawo ndi Madagascar's Covid-Organics (CVO) na Tuesday. Ọ bụ Madagascar zigara ndị mmadụ ihe ahụ's Onye isi ala Andry Rajoelina, dị ka Houselọ Ọchịchị nke Gambia.
Nke a bụ mkparịta ụka ya na France 24 TV
"Ekwesighi ileda ndị ọkà mmụta sayensị Africa anya," ọ gwara France 24 na Radio France International (RFI).
"Echere m na nsogbu ahụ bụ na (ihe ọ drinkụ )ụ ahụ) sitere n'Africa ma ha enweghị ike ikweta… na obodo dịka Madagascar up wepụtara usoro a iji chekwaa ụwa," ka Rajoelina kwuru, onye na-azọrọ na ịgwọ ọrịa ahụ na-agwọ ndị ọrịa n'ime 10 ụbọchị.
Ugbua Equatorial Guinea, Guinea-Bissau, Niger, na Tanzania ewerela mbupu nke ọgwụ, nke emepere n'ọnwa gara aga.
"Ọ dịghị mba ma ọ bụ òtù ọ bụla ga-egbochi anyị ịga n'ihu," Rajoelina kwuru na nzaghachi maka nchegbu WHO.
Ọ na-ezo aka na ọgwụgwọ ahụ dị ka "ọgwụgwọ ọdịnala ka mma", na-agbakwụnye na Madagascar anaghị eduzi ọnwụnwa ahụike kama "nyocha ahụike" dịka ntuziaka WHO.